प्राथमिक उपचार दिवस(सम्पादकीय)
आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हो । प्राथमिक उपचार भन्नाले कुनै पनि चोटपटक लाग्दा वा कुनै कारणबाट शरीरले अस्वस्थ महशुस गर्दा गरिने पहिलो घरेलु वा चिकित्सकीय उपचार पद्धति हो । कसैलाई सर्पले ट...
आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हो । प्राथमिक उपचार भन्नाले कुनै पनि चोटपटक लाग्दा वा कुनै कारणबाट शरीरले अस्वस्थ महशुस गर्दा गरिने पहिलो घरेलु वा चिकित्सकीय उपचार पद्धति हो । कसैलाई सर्पले टोक्यो भने सबैभन्दा पहिले टोकेको ठाउँको तलमाथि कपडाले कसेर बाँध्ने गरिन्छ । ताकि त्यसको जहर सम्पूर्ण शरीरमा फैलन नपाओस् । त्यसरी नै टोकेको घाउमा सफा नयाँ ब्लेडले चिरेर घाउलाई तल पारेर ठूला अस्पतालमा उपचारको लागि लैजाने गरिन्छ । यसो गर्दा रगतको प्रबाहसँगै विषको मात्रा पनि रगतसँग बा...
आत्महत्या रोकथाम दिवस(सम्पादकीय)
जीवनसँग निरास भएपछि मानिसले आफूलाई मेटाउन चाहन्छ । आफूले आफैलाई मृत्युको मुखमा धकेल्छ । यसलाई आत्महत्या भन्ने गरिन्छ । आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हो । विश्वमा दैनिक कति मानिसले आत्महत्...
जीवनसँग निरास भएपछि मानिसले आफूलाई मेटाउन चाहन्छ । आफूले आफैलाई मृत्युको मुखमा धकेल्छ । यसलाई आत्महत्या भन्ने गरिन्छ । आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हो । विश्वमा दैनिक कति मानिसले आत्महत्या गरी प्राण गुमाएका होलान् यो तथ्य त संयुक्त राष्ट्रसंघले राखेको होला, तर, अनुमानको आधारमा भन्नुपर्दा दैनिक सयको संख्यामा मानिसले आत्महत्या गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मानिसले आत्महत्या गर्नुका अनेक कारणहरू हुन्छन् । परिबार समाजमा हुने हेलाहोँचो, अपमान, भविष्यमा देखिएको असफलता, आ...
कुशेऔँशी र पिताको महत्व (सम्पादकीय)
विरञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्टि निसर्गतःनुद सर्वाणी पापानी दर्भस्वस्ती करोभवः ओम् हुँ फट्स्वाहा । कुश उखेल्नको लागि यो मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्छ । आज कुशे औँशी हो...
विरञ्चिना सहोत्पन्न परमेष्टि निसर्गतः
नुद सर्वाणी पापानी दर्भस्वस्ती करोभवः ओम् हुँ फट्स्वाहा ।
कुश उखेल्नको लागि यो मन्त्र उच्चारण गर्नुपर्छ । आज कुशे औँशी हो । महिलाहरूको महान पर्व तीज आउनुभन्दा चार दिन अगाडि पर्ने यो दिनमा उपरोक्त मन्त्र उच्चारण गर्दै बिहानै पण्डितहरूले स्नानादी गरी उखेलेको कुशलाई विभिन्न धार्मिक कार्यमा प्रयोग गरिन्छ । कुशविना कुनै पनि धार्मिक कार्यहरू हुँदैनन् । सानादेखि ठूलासम्मका धार्मिक कार्यमा यसलाई अनिवार्य न...
शिक्षा तथा साक्षरता दिवस(सम्पादकीय
आज शिक्षा तथा साक्षरता दिवस हो । शिक्षा भनेको ज्ञान हो । ज्ञानकै माध्यमबाट विश्वका कतिपय बैज्ञानिकहरूले आफ्नै हातबाट आधुनिक उपकरणहरू निर्माण गरी विभिन्न अन्तरिक्षहरूको अवलोकन गर्दैछन् । अत...
आज शिक्षा तथा साक्षरता दिवस हो । शिक्षा भनेको ज्ञान हो । ज्ञानकै माध्यमबाट विश्वका कतिपय बैज्ञानिकहरूले आफ्नै हातबाट आधुनिक उपकरणहरू निर्माण गरी विभिन्न अन्तरिक्षहरूको अवलोकन गर्दैछन् । अत्याधुनिक सुचना संयन्त्रको आविस्कार गरेका छन् । यसका पछाडि शिक्षा तथा साक्षरताको मुख्य हात रहेको छ । मानिस स्वभावैले जिज्ञासु प्राणी हो । आफ्ना दैनिक गतिविधिबाट मानिसले प्रारम्भिक ज्ञान सिक्यो । ब्यवहारबाट ज्ञान आर्जन गर्दैजाँदा साक्षर बन्यो । शिक्षित बन्ने बाटो अबलम्बन ग¥यो ।...
निजामति कर्मचारीका कुरा (सम्पादकीय)
आज निजामति कर्मचारी दिवस हो । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । जब राज्यको अबधारणा बन्यो त्यसको निर्माण गर्ने क्रम सैन्यशक्तिबाट भएको थियो । सैन्यशक्तिको बलमा राज्यलाई ब्यवस्थित रूपम...
आज निजामति कर्मचारी दिवस हो । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । जब राज्यको अबधारणा बन्यो त्यसको निर्माण गर्ने क्रम सैन्यशक्तिबाट भएको थियो । सैन्यशक्तिको बलमा राज्यलाई ब्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि कर्मचारीतन्त्रको विकास गरियो । त्यसलाई स्थायी रूप दिइयो । कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सेना यी अंगलाई कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत अबयब मानिन्छन् । त्यसलाई ब्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नको लागि अहिले कानुनी रूपमा राज्यलाई मजबुत बनाउने गरिएको छ । अनेक मौ...
प्रवेश गरिँदै प्रविधिको युगमा (सम्पादकीय)
अब मुलुकलाई बिस्तारै प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान थालिएको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालय, संघ संस्थाहरूमा बैज्ञानिक उपकरणहरू जोडेरआन्तरिक गतिविधि हेर्ने, कर्मचारीका काम कारबाही निगरानी गर्ने ग...
अब मुलुकलाई बिस्तारै प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजान थालिएको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालय, संघ संस्थाहरूमा बैज्ञानिक उपकरणहरू जोडेरआन्तरिक गतिविधि हेर्ने, कर्मचारीका काम कारबाही निगरानी गर्ने गर्न थलिएको छ । यसले भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्नुका साथै कामको गति बढाएको छ । वास्तवमा प्रविधि आवश्यक पक्ष हो । कर्मचारीहरू कार्यालयमा कुन बेला हाजिरहुन्छन्, कति लगनकासाथ काम गर्छन् ? कतै गफमा ब्यस्त त छैनन् ? कतै हाजिरगरेरटाप कस्ने गरेका त छैनन् ? साँझ कतिबेलासम्म काम गरेका छन्,ख...
मानव बेचबिखनका कुरा(सम्पादकीय)
आज मानव बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय दिवस हो । यो शब्दले नै बोलेको छ कि नेपालमा मानिसहरू बेचबिखनका बस्तु बनाइएका छन् । मानिसलाई अन्य कुनै बस्तुले बेच्न सक्तैन । मानिसलाई मानिसले बेच्ने गर्दछ ।...
आज मानव बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय दिवस हो । यो शब्दले नै बोलेको छ कि नेपालमा मानिसहरू बेचबिखनका बस्तु बनाइएका छन् । मानिसलाई अन्य कुनै बस्तुले बेच्न सक्तैन । मानिसलाई मानिसले बेच्ने गर्दछ । बाठा फटाहाहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर सोझासिधा मानिसलाई ललाइफकाइ गरेर अरूलाई बेच्ने गर्दछन् । नेपालमा मानिसहरू बेच्ने एकखालको पेसा बनाइएको छ । छोरी चेलीहरूलाई काम लगाउने नाममा विभिन्न बेश्यालयमा मोटो रकममा बेच्ने गरिन्छ । काम दिलाइदिने नाममा कमिशन लिएर कतिपय एजेण्टहरूले युवा यु...
पुस्तकालय दिवस (सम्पादकीय)
आज पुस्तकालय दिवस हो । पुस्तकलाई ज्ञानको स्रोत मानिन्छ । अहिले विश्वमा जति पनि मानिसहरू चर्चाको शिखरमा छन् तिनीहरूको जीबनी पुस्तक, पुस्तकालयसँग जोडिएको छ । कार्ल माक्र्स जसले विश्वलाई समाज...
आज पुस्तकालय दिवस हो । पुस्तकलाई ज्ञानको स्रोत मानिन्छ । अहिले विश्वमा जति पनि मानिसहरू चर्चाको शिखरमा छन् तिनीहरूको जीबनी पुस्तक, पुस्तकालयसँग जोडिएको छ । कार्ल माक्र्स जसले विश्वलाई समाजवादी उत्पादन तथा बितरणको सम्बन्धमा विश्वलाई आँखा देखाए उनी पुस्तकालयमा नै अधिकांश समय बिताउँथे । उनका समकक्षी एंगेल्स पनि पुस्तकालयमा पुस्तकहरू पढ्नमा निमग्न हुन्थे । पुस्तकालयले नै उनीहरूलाई भेट, चिनजान गराएको थियो । समाजवादी समाज निर्माणका अर्का विद्वान ज्ञाता, विष्लेषक तथा योद...
रणउजेश्वरी विजय जात्रा (सम्पादकीय)
पाल्पाको भैरवस्थानमा गरिने सिन्दुर जात्रा नेपालकै उच्च जात्रामा गणना गरिएको जात्रा हो । कतिपय जात्राहरू आध्यात्मवादी मिथकसँग जोडिएर आएका छन् । जसको तिथिमिति हुँदैन । जसले जुन कथा, कहानी जो...
पाल्पाको भैरवस्थानमा गरिने सिन्दुर जात्रा नेपालकै उच्च जात्रामा गणना गरिएको जात्रा हो । कतिपय जात्राहरू आध्यात्मवादी मिथकसँग जोडिएर आएका छन् । जसको तिथिमिति हुँदैन । जसले जुन कथा, कहानी जोडे पनि मिल्छ । ती जात्राका लागि जात्रा हुन् । तर, पाल्पाको रणउजेश्वरी भगवती जात्रा नेपालको स्वाभीमान, नेपालीहरूको बीरता, त्याग र बलिदानसँग जोडिएको छ । त्यसैले यो जात्राको लागि जात्रा नभएर राजनैतिक महŒव रहेको छ । यसको सम्बन्धमा कसैले मिथक कहानी बनाउन सक्तैन । काल्पनिक जलप लग...
हिन्दुहरूले श्रीकृष्णलाई भगवानको अबतारको रूपमा अगाध आस्थाकासाथ मनाउने गर्दै आएका छन् । आज जन्माष्टमीको दिनलाई श्रीकृष्णको जन्मदिन मानिएको छ । हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेले उनको जन्मदिन धुमध...
हिन्दुहरूले श्रीकृष्णलाई भगवानको अबतारको रूपमा अगाध आस्थाकासाथ मनाउने गर्दै आएका छन् । आज जन्माष्टमीको दिनलाई श्रीकृष्णको जन्मदिन मानिएको छ । हिन्दू धर्ममा आस्था राख्नेले उनको जन्मदिन धुमधामकासाथ मनाउँछन् । विभिन्न ठाउँमा रहेका कृष्ण मन्दिरहरूमा गएर पूजा अर्चना गरिन्छ । नाचगान, भजन कीर्तनहरू गरिन्छ । थुप्रै मानिस उनको सम्मानमा उपबास पनि बस्ने गरेका हुन्छन् । उनलाई द्वापर युगका नायक मानिन्छ । चलाख, सोँच विचारका धनी, बालक अबस्थादेखि नै उनमा अनेक प्रतिभाहरू थिए । शत्...